Lisitry ny singa mandritra ny vanim-potoana | Nohavaozina ny rakibolana simika 2022
Fampivoarana tsotra misy isa Actomic sy lanja
Vondrona → ↓ Fotoana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* Vondrona Lantan
** Vondrona Actini
Metaly Alkali Metaly alkaline Lanthanide Actinide Metaly tetezamita
Metaly taorian'ny tetezamita Metalloid Tsy metaly Nonmetal mihetsika Gas mahery
Toetoetra simika tsy fantatra
Toe-javatra eo amin'ny natiora
Avy amin'ny fahalovana
Tsy misy sisintany: Tsy hita
Fepetra mahazatra momba ny mari-pana sy ny tsindry
Ny fepetra mahazatra amin'ny mari-pana sy ny tsindry dia fari-pitsipika mahazatra momba ny fandrefesana fanandramana hamelana ny fampitahana eo anelanelan'ny antontan-kevitra isan-karazany.
Ny mari-pana mahazatra sy ny tsindry dia matetika antsoina koa hoe fepetra mahazatra. Ny fepetra mahazatra dia mety misy koa ny hamandoana mahazatra.
Famaritana maro koa no ampiasain'ny fikambanana hafa momba ny fenitra mahazatra (jereo ny tabilao etsy ambany); izay indraindray ny hevitra momba ny maripanan'ny efitrano (25 degre Celsius) no ampiasaina fa tsy 0 degre Celsius.
Ny metaly alkali dia vondrona singa ao amin'ny vondrona 1 amin'ny tabilao misy singa simika (afa-tsy ny hidrogen). Ireo singa ireo dia mihetsika be ary tsy dia fahita amin'ny endriny madio.
Ny mampiavaka ireo metaly alkaly ireo dia: volondavenona fotsy, malefaka ary misy gravity manokana ambany. Vetivety dia mihetsika amin'ny halogen element.
Tany metaly alkaly
Ireo metaly ireo dia antsoina hoe tany misy alikaola satria ny toetra mampiavaka azy eo anelanelan'ny alkaly (oksida amin'ny metaly alkaly) sy ny tany tsy fahita firy (oksida misy metaly an-tany tsy fahita).
Ny metaly tetezamita dia singa simika 68 misy isa atomika 21 hatramin'ny 30, 39 hatramin'ny 48, 57 hatramin'ny 80 ary 89 hatramin'ny 112. Ny anton'io anarana io dia ny toerana misy azy ireo eo amin'ny latabatra ara-potoana satria manintona ny fiandohan'ny tetezamita izany noho ny fanampiana ny elektrôna ao amin'ny orbit atomika ny kilasy d.
Raha voafaritra tsara kokoa, ny metaly tetezamita dia singa miforona ion farafahakeliny miaraka amin'ny orbital (orbital) feno d, izany hoe singa d-element afa-tsy ny scandium sy ny zinc.
Fitaovana fanoratana Google